မြဝတီ-ကော့ကရိတ် အမြန်လမ်းတွင် ဂျပန် အင်ဂျင်နီယာအဖွဲ့မှ ရောင်ပြန်ပြားများ တပ်ဆင်ရန် ကွင်းဆ? - Yangon Media Group
မြဝတီ၊ ဇန်နဝါရီ ၂ဝ
မြဝတီ- ကော့ကရိတ်အမြန်လမ်းမကြီးရှိ ယာဉ်တိမ်းမှောက်မှုအများဆုံးဖြစ်သည့် ကွမ်းခြံကွေ့နေရာတွင် ဂျပန် နိုင်ငံ Mikado Kousetsu ကုမ္ပဏီမှအင်ဂျင်နီယာ Mr. Kazuhiko Yoshino နှင့်အဖွဲ့သည် ရောင်ပြန် သတိပေးပြားများတပ်ဆင်ရန်အတွက် ဇန်နဝါရီ ၂ဝ ရက် နံနက် ၁ဝ နာရီက မြဝတီခရိုင်မှတာဝန်ရှိသူများနှင့်အတူ ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ ကြောင်း သိရသည်။
မြဝတီခရိုင် (MORS) Myanmar Organization For Road Safety ဥက္ကဋ္ဌဦးစောမိုးမြင့်၏ အကူအညီတောင်းခံမှုဖြင့် ဂျပန်နိုင်ငံ Mikado Kousetsu ကုမ္ပဏီမှလွန်ခဲ့သည့် သုံးလခန့်ကမြဝတီ-ကော့ကရိတ်အမြန်လမ်းမကြီးအား လာ ရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ကာ ယာဉ်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးအတွက် တပ်ဆင်ရန် လိုအပ်နေသော ရောင်ပြန်ပြားများအား အချိန်မီတပ်ဆင်ပေးရန်အတွက် ယခုလိုကွင်းဆင်းဆောင်ရွက် ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
”ရောင်ပြန်ပြားတစ်ပြားရဲ့ တန် ဖိုးကကျပ် ၂၅ဝဝ ရှိပါတယ်။ ၁ဝ ပေအကွာမှာ တစ်ခုစီတစ်ခုစီတပ် ပေးသွားမှာဖြစ်ပြီး အန္တရာယ်ရှိတဲ့ နေရာတွေစုစုပေါင်းတစ်မိုင်ခန့်ကို ကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီက အခမဲ့တပ်ဆင်ပေးသွားမှာပါ။ လာမယ့်လေးလပိုင်းထဲမှာ လာရောက်တပ်ဆင် ပေးသွားမှာဖြစ်ပြီး အဲဒီလိုတပ်ဆင် ဖို့ အခုကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်တာ ဖြစ်ပါတယ်”ဟု Mr.Kazuhiko Yoshino က ပြောသည်။
ယခုပြုလုပ်ထားသည့် Slow down များမှာ ကုန်းအဆင်းနေရာ မှစတင်ပြီး လုပ်ရမည်ဖြစ်သလို ယာဉ်မောင်းများအနေဖြင့် သတ်မှတ်မိုင်နှုန်းကီလိုမီတာ ၄ဝ ထက်ပိုပြီး မောင်းနှင်နေမှုကြောင့် အရှိန်မထိန်းနိုင်ဘဲ ယာဉ်တိမ်းမှောက်မှုဖြစ်ပွား နေရသဖြင့် ယာဉ်မောင်းများအနေ ဖြင့် စည်းကမ်းရှိစွာမောင်းနှင်ရန်လို ကြောင်းနှင့် စည်းကမ်းမဲ့မောင်းနှင်မှုများအား ဒဏ်ရိုက်သည့်စနစ်ကျင့် သုံးရန် လိုအပ်ကြောင်း ၎င်းကဆက်လက်ပြောကြားသည်။
ပုံစံတူ ရုပ်တုများကို ဆီလီကွန်ဖြင့် ထုလုပ်မှု ပိုများလာ
အနားယူပြီးပါက မန်ယူနည်းပြ အဖွဲ့တွင် ကာရစ် ပါဝင်လာနိုင်
ခေတ်သစ်ပိုးလမ်းမစီမံကိန်းအတွက် ကုန်သည်စက်မှုအသင်းချုပ်က ချည်မျှင်နှင့်အထည်အလိပ် လုပ်ငန်??